भारतीय बिसादी युक्त तरकारि खाएर पनी बुद्दी आउला त ? – Complete Nepali News Portal
भारतीय बिसादी युक्त तरकारि खाएर पनी बुद्दी आउला त ?
ScotNepal July 6, 2019
तरकारि भित्रको सरकारी नीति :-
हुन त धेरै पहिले देखी नै हामिले जानी नजानी बिसादी युक्त तरकारि खाई रहेका रहेछौ, अहिले आएर बिरोध किन भन्ने प्रस्न पनी उठला, तर ढिलै भए पनी सही सरकारी निर्णय आएको थियो तर भारतको दबाव सामू त्यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । अब प्रस्न उठन सक्छ, जाबो भारतको ‘तरकारि’ को दबाव त थेग्न नसक्नेले भारतको ‘सरकारी’ दबाव कसरी थेग्ला र ? मलाई त यो कुराको पो चिन्ता भयो । की त मन्त्रालयका कर्मचारीले बिसादी युक्त तरकारि आयात रोकेर भारतीय व्यापारी संग कमिसन लीने उद्देश्य हूनु पर्छ, नत्र भारतीय तरकारि आयात भारतको दबाव भंदै राता रात कीन फुकवा गरियो ? रातारात तरकारि बाट बिसादी हटने होईन । अर्कों कुरा जनताले क़ुन नेपाली र क़ुन भारतीय तरकारि हो छुट्याऊन नसक्ने हुनाले भारतीय उत्पादन बहिष्कार गर्न गाह्रो छ । तर भारत सामू सरकार झुक्यो भने यो भारतिय हो की नेपाली सरकार हो त्यो पनी छुट्याऊन गाह्रो हुने छ, अनी त्यो घोर लज्जाको बिसय पनी हुनेछ । त्यस्तो सरकार जनताको सरकार होईन, परालको खुट्टा भएको भारत परस्त सरकार कहलीने छ । रास्टीय स्वार्थ छोडनु माक्सबादको सिद्धांत र बाटो कदापि हुन सक्दैन । एदी यो निर्णय फिर्ता गर्ने हो भने बिसादी युक्त तरकारि आइ नै रहने छ । कम्तिमा पकाउनु अछी कुनै पनी तरकारि आधा घण्टा पानीमा भिजाए आधा बीस जाने डाक्टर र बिज्ञहरूको भनाइ छ । तर आधा घण्टा भिजाउने न त पानी छ, न त बानी छ । कीन की नेपाली संग पैशाको खानी छ । तर यो तरकारिले नेपालीलाई हस्पिटल होईन सोर्ग लानी छ । यहाँको यस्तै काहानि छ । यस्ता गम्भीर बिसयमा जन प्रतिनिधिले संसदमा चर्को आवाज़ उठाऊन सक्नु पर्दछ, नत्र के को जन प्रतिनिधि ? अनी सानो तिनो इशूमा संसद अबरूद्द गर्ने कांग्रेसले बिसादी तरकारि आयात विरुद्ध संसद अबरूद्द गर्ने हिक्मत छ ? छैन किन भने त्यो भारत विरुद्ध हुंछ ।
एदी भारतीय तरकारि आइ रहने हो भने नेपालली तरकारि कहिले पनी बिक्दैन । अनी तरकारि नबिके पछी उत्पादन पनी बडदैन । भारतीय तरकारि भंदा नेपाली तरकारि महँग़ो हो भन्ने कुरा १००% गलत हो । किन भने व्यापारीलाई नाफा धेरै हुने हुनाले मात्र उसले नेपाली तरकारिको सट्टा भारतीय तरकारि आयात गरेर बेच्ने गर्दछन । जस्तो की एक किलो भारतीय टमाटरको ख़रीद मूल्य २० रूपैया छ भने उसले नाफा र धुवानी ख़र्च राखेर ४० मा बेच्छ, तर नेपाली तरकारि २५मा किनेर ४० मा बेच्न व्यापारी तैयार छैनन । भारत संग २० मा कीनेर ४० मा बेच्नेले २५मा कीनेको ५० मा बेच्न खोज्छ्न । एदी २५मा कीनेर ४० मैं बेच्ने हो भने नेपाली तरकारिले नै बाज़ार पाऊथ्यो । खै व्यापारीमा रास्टीय भावना ? त्यहि माथी ३ करोड जनसंख्या भएको देसमा ९ करोड़ जग्गा प्लटिंग़ भएको तथ्य सरकारी निकायले सार्बजनिक गरी सकेका छन, यस्तो भयाबह स्थितिमा तरकारि र अन्न क़ँहा फलाउने छतमा ? सरकारले खेती योग्य ज़मीनको प्लटिंग़ रोक्नु पर्दैन ? अर्कों कुरा विदेशियका नेपालीको उद्देश्य जग्गा कीन्ने र घर बनाउने मात्र हुंछ । उत्पादन मुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने मात्र नेपाली उत्पादन बडेर आयात घटछ अनी पो व्यापार घाटा कम हुंछ । यस्ता कुरामा खै रास्टीय नीति । भारतीय बिसादी युक्त तरकारि खाएर पनी बुद्दी आउला त ?